Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pinoana tany Jeneela Usain Bolt - Fikarohana momba ny vatana teraka
Nanoratra tamiko ny mpanohana iray ao amin'ny ReincarnationResearch.com miaraka amin'ny fijeriko hoe iray amin'ireo kintan'ny lalao olaimpika, Usain Bolt, izay nomena anarana hoe olona haingana indrindra eto ambonin'ny tany, angamba ny fiverenan'ny vovoka indray Jesse Owens. I Owens koa dia heverina ho olona haingana indrindra manerana izao tontolo izao rehefa nahazo meday volamena tao amin'ny Olympika 1936 tany Alemaina Nazi.
Rehefa nijery ity lalao novolavolaina ity aho, dia hitako fa ny tena endriky ny fitoviana teo amin'i Owens sy Bolt dia tena mahagaga. Raha ny marina dia mitovy amin'ny olona iray izy ireo.
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa Usain Bolt dia Jesse Owens nandritra ny fiainany taloha.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Araka ny efa nomarihina, misy fitoviana manahirana ao amin'ny endriky ny endriky ny Jesse Owens sy Usain Bolt.
Innate Past Life Talent: Nanambara i Usain Bolt fa ny fanatanjahan-tena sy ny atletisma dia izay nokarakarainy fony izy mbola tanora. Nanjary lasa mpitaingin-tsolika manerantany izy. Ny tombontsoa, ​​i Owens sy Bolt dia samy nanamarika ny toe-javatra mitovy, ny 100 metatra, ny 200 metatra ary ny 4 X XMUMX metatra torolalana, mametraka ny rakitsoratra manerantany ary nahazo medaly volamena tamin'ny Lalao Olaimpika.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Teraka tany Etazonia i Jesse Owens, any Alabama, raha teraka tany Jamaika kosa i Usain Bolt.